Wiil dunida kaga yaabiyey SIX-PACK been ah oo uu samaystay! + Sawirro | Hadalsame Media
Home Madadaalada Wiil dunida kaga yaabiyey SIX-PACK been ah oo uu samaystay! + Sawirro
Wiil dunida kaga yaabiyey SIX-PACK been ah oo uu samaystay! + Sawirro
(Bangkok) 01 Maajo 2019 – Wiil ayaa dunida uga yaabsaday kaddib markii uu samaystay murqaha caloosha laga muujiyo ee loo yaqaanno six-pack oo gebi ahaanba macmal ah.
Pangpaparn Ounvilai, 24 jir, oo u dhashay Thailand ayaa lagu sameeyay qalliin caloosha looga bixinayo xayrta si deeto loosoo saaro murqaha caloosha.
Mr Ounvilai, oo horayba caan ugu ahaa qalliinnada la isku qurxiyo ayaa qalliinkan ku bixiyay kharash gaaraya £3,000 oo gini, kaddib markii uu ku fashilmay isku day ku aaddanaa inuu samaysto six-pack run ah.
Previous articleSawirka Xaliima Aadan oo dunidu ka doodayso (Arag jawaabaha baraha bulshada)
Next articleWaa maxay XAALAD DEG DEG ah, maxaa se ka ratibma?